Yintoni iDMARC? Ngaba i-DMARC idibana njani ne-imeyile yobuqhetseba?
NgoLwesihlanu, Novemba 6, 2015 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Ukuba ukwishishini lokuthengisa nge-imeyile, usenokuba ukhe weva malunga noku I-DMARC. I-DMARC imele Ubungqina boMyalezo osekwe kwiDomain. Ngolwazi olongezelelweyo, ndingacebisa kakhulu ukuba UAgari indawo kunye neyabo Amaxwebhu e-DMARC kunye nephepha lezixhobo ngesihloko.
Ngokutsho kweengcali kwi 250ok, Umxhasi wethu we-imeyile, Nazi izibonelelo ze-DMARC:
Imisela ukusebenza kunye nokutolikwa kwemigaqo-nkqubo eyaziwayo neyasasazwa ngokubanzi ye-imeyile SPF kunye ne-DKIM.
Kukunceda ekuphumezeni nasekuhanjisweni kwe-SPF kunye ne-DKIM kuyo yonke imilambo yakho yeposi ngaphandle koloyiko lokuchaphazela ukuhanjiswa.
Iyalela ii-ISPs kunye nemimandla yabucala ekukhuseleni abasebenzisi kubathumeli abenza okungagunyaziswanga nokusetyenziswa ngobuqhetseba kwegama lakho kunye nomxholo.
Ibangela abafumanayo kwihlabathi liphela ukuba bavelise imigangatho yomzi mveliso (kodwa eyabucala kunye neyamehlo akho kuphela!) Iingxelo malunga neposi abayifumanayo evela kuwe.
250ok Wongeze iDashboard ye-DMARC kuLwazi lwabo oluLwazi, isixhobo ekulula ukusisebenzisa esenzelwe ukukunceda uqinisekise iirekhodi zakho ze-SPF kunye ne-DKIM kunye nokukunceda wenze utshintsho olungena magingxi kwi-DMARC.
Siye saxhasa kwaye saphuhlisa le infographic ukunceda abathengisi be-imeyile ukuba baqonde ngcono zombini ingxaki kunye nexabiso lokufumana imigaqo ye-DMARC. Enkosi ngokukhethekileyo kulo lonke iqela le-DMARC elincede ukusifundisa nokusinika idatha esetyenziswe kwi-infographic!
tags: 250okdkimI-DMARCInkcazo yedmarcukuhanjiswa kwee-imeyileubuqhetseba be-imeyileIsebenza njani iDMARCspfyintoni i-DMARC
Idatha yabathengi ekufanele ukuba uyayilanda kuMxholo wakho wokunxibelelana